အခမဲ့၊ အခမဲ့၊ ပွင့်လင်းသော LMS ပလက်ဖောင်းများ - အင်္ဂါရပ်များနှင့် Functions များ | Linux မှ
အခမဲ့၊ အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသော LMS ပလက်ဖောင်းများ - အင်္ဂါရပ်များနှင့် Functions များ
အ LMS ပလက်ဖောင်းများ သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းသင်ယူမှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ, ကမ်းလှမ်း အကျိုးရှိစွာနှင့်ထိရောက်သောအခြားရွေးချယ်စရာအတွက်တီထွင်ရန် သင်ကြားခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းဖြစ်စဉ်များဆိုလိုသည်မှာပုံစံနှင့် / သို့မဟုတ်ပညာရေးဖြစ်စဉ်များဖြစ်သည်။
ဤအရာအချို့နှင့်အတူဖန်တီးနေကြသည် အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် နှင့် / သို့မဟုတ်ရိုးရိုးဖြစ်ကြသည် အခမဲ့။ များစွာသောသူတို့သည်ယင်းတို့ကိုအများဆုံးအသုံးချနိုင်သည့်နည်းဖြင့်ဖြစ်သည် အချိန်, အရင်းအမြစ်များနှင့်စွမ်းရည် အထူးသဖြင့်ခက်ခဲသောအချိန်များဖြစ်သည့်ယနေ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်နေထိုင်သောကုန်ကျစရိတ်၊ Coronavirus 19 သို့မဟုတ် COVID-19.
အ LMS ပလက်ဖောင်းများ အများအားဖြင့်အတွက်အသုံးပြုကြသည် ပညာရေးကဏ္ sector o ပညာရေး / လေ့ကျင့်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထို့ကြောင့်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဲ့သို့သောပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းများစွာရှိသည် တက္ကသိုလ်များ၊ ကောလိပ်များနှင့် Institutes များ သူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားသူတို့ကိုရရှိနိုင်စေရန်လေ့သောသူတို့ကို။
1 အခမဲ့၊ ပွင့်လင်းသော LMS ပလက်ဖောင်းများ
1.2 ကတ္တား LMS
အခမဲ့၊ ပွင့်လင်းသော LMS ပလက်ဖောင်းများ
တစ်ခုချင်းစီကို၏အထင်ရှားဆုံးတို့တွင် အခမဲ့၊ ပွင့်လင်းသော LMS ပလက်ဖောင်းများ ၎င်းကိုလက်ရှိစျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည်၊ အောက်ပါတို့ကိုဖော်ပြနိုင်သည်။
၎င်းသည် LMS ပလက်ဖောင်းများကိုဖန်တီးရန်တပ်ဆင်နိုင်သောပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းကိုကနေဒါတွင် ATRC အဖွဲ့အစည်း (အလိုက်နည်းပညာအရင်းအမြစ်စင်တာ) ကတီထွင်ခဲ့သည်။
၎င်းသည် PHP, Apache, MySQL ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး Windows, GNU Linux သို့မဟုတ် Unix Solaris တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
၎င်းသည်လက်ရှိတွင်ဗားရှင်း ၂.၂.၄၊ ဘာသာစကား ၃၀ ကျော်ဖြင့်ရရှိနိုင်ပြီး SCORM ဗားရှင်း ၁.၂ နှင့်လိုက်ဖက်သည်။
၎င်းတွင်လူမှုလေ့လာမှု၊ ဘလော့များ၊ ဖိုရမ်များနှင့်ဝီကီစသည့်အီလက်ထရောနစ်သင်ကြားရေးကိရိယာများ (e-learning) ရှိသည်။
၎င်းကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းသည်ရိုးရိုးလေးဖြစ်ပြီး၎င်းသည် module များနှင့် themes များအလိုက်အလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အဓိကအားနည်းချက်မှာ၎င်း၏အခြေခံသွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏စရိုက်နှင့်မကောင်းသောမျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ငွေပေးချေခြင်း / စုဆောင်းခြင်းနည်းလမ်းများသို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများအားမူလအတိုင်းထည့်သွင်းမထားပါ။ နှင့်၎င်း၏တုံ့ပြန်မှုကို web စွမ်းရည်ကန့်သတ်ထားသည်။
ဒီကိရိယာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုလျှင်သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် လက်ရှိဗားရှင်းအသစ်ကဘာလဲ နှင့် အဆိုပါ module တွေ၏ဖော်ပြချက် က compose ။
၎င်းသည် AGPLv3 လိုင်စင်အောက်ရှိ open source အပေါ် အခြေခံ၍ အွန်လိုင်း LMS ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။
၎င်းကိုယူအက်စ်တွင် Software Development Organization "Instructure, Inc" မှတီထွင်ခဲ့သည်။
၎င်းတွင်ခေတ်မီဒီဇိုင်းရှိပြီးအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်အီလက်ထရောနစ်သင်ကြားမှုဖြစ်စဉ် (e-learning) အတွက်အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့အစည်းများကကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။
၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောတုန့်ပြန်မှုရှိသော web စွမ်းရည်ရှိပြီး၎င်းသည်မတူညီသောထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် LTI (Learning Tools Interoperability) နည်းပညာအသစ်ကိုထောက်ပံ့သည်။
၎င်းတွင်သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကိုပံ့ပိုးရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောညွှန်းကိန်းများပါ ၀ င်သည့် Dashboard ရှိပြီး၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောလူမှုစွမ်းရည်များ - စုပေါင်းသင်ယူမှုကိုမြှင့်တင်ရန်စနစ်များနှင့်ကိရိယာများရှိသည်။
ဒီကိရိယာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုလျှင်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည် အခြားရွေးချယ်စရာအသိုင်းအဝိုင်း site ယခုသင်တို့၏နေရာ GitHub.
၎င်းကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်Asociación Chamilo မှအမြတ်ထုတ်ခဲ့သည်။
“ Chamilo အသင်း” သည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် LMS Chamilo ပလက်ဖောင်း၏အသုံးပြုမှုကိုသေချာစေရန်ကြိုးပမ်းသည်။ ၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမှာကမ္ဘာအနှံ့ပညာသင်ကြားခွင့်ကိုလွတ်လပ်စွာရယူနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
၎င်း၏စပိန်ဘာသာဖြင့်“ Chameleon” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အခမဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သော LMS ပလက်ဖောင်းဖြစ်ခြင်း၊ အလိုက်သင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးအများစုအတွက်အလွယ်တကူရရှိနိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့်တက္ကသိုလ်များတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။
၎င်းသည် GNU / GLP v3 လိုင်စင်အောက်တွင်ရှိနေသောကြောင့်၎င်းသည်အီလက်ထရောနစ်သင်ကြားမှုဖြစ်စဉ် (e-learning) ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ထပ်ဆောင်းသောအရာများကိုတပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။
၎င်းသည် LMS Dokeos Platform ၏ကုဒ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ၎င်းကိုလက်ရှိတွင်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၈၀ ကျော်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူသန်း ၂၀ ကျော်ရှိသည်။
၎င်းသည် PHP, Apache, MySQL ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး Windows, MacOS နှင့် GNU Linux များတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
ဒီကိရိယာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုလျှင်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည် တရားဝင်ဘလော့ဂ် နှင့် အပိုင်း "မကြာခဏမေးခွန်းများ" ၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်။
၎င်းသည် Moodle နှင့်အခမဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်လွှင့်တင်သော open source ကို အခြေခံ၍ အွန်လိုင်း LMS ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။
၎င်းကိုဂူဂဲလ် AdSense မှတစ်ဆင့်ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်အရ LMS ဝန်ဆောင်မှုများကိုအခမဲ့ကမ်းလှမ်းရန် Moodle Fans များဖန်တီးသောပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းကတီထွင်ခဲ့သည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်သင်၏သင်တန်းများကိုအခမဲ့တင်ခြင်းနှင့်အချို့သောအခြေအနေများတွင်အများပြည်သူသိရှိစေရန်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အခမဲ့နှင့်လစာပေးသောပညာရေးစီမံကိန်းများအတွက်အသုံးဝင်သည်။
၎င်းသည်သင့်ကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်းသင်ယူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၊ ၎င်းမှာကိုယ်ပိုင်ဆပ်ဒိုမိန်း၊ လုံခြုံစိတ်ချရသောဝင်ရောက်ခွင့်၊ အပြည့်အဝအုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်ထူးများနှင့်လုံးဝအခမဲ့ရှိသော virtual စာသင်ခန်းတစ်ခုကိုအလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်သည်။
အဓိကအားနည်းချက်မှာသင်တန်းသားများ (ကျောင်းသားများ (သို့) ဖောက်သည်များ) သည်၎င်းတို့အားမကောင်းသော (သို့) အရည်အသွေးနိမ့်သူများအဖြစ်သတ်မှတ်လေ့ရှိသောကြော်ငြာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ module မ်ားကိုမပေါင်းစပ်ထားသဖြင့်၎င်း၏ရောင်းအားစွမ်းရည်မှာအကန့်အသတ်ရှိသည်။
ဒီကိရိယာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုလျှင်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် မင်းဘယ်မှာလဲ အခြေအနေများ, ကြော်ငြာအစီအစဉ်များနှင့်လှူဒါန်းမှုများ၊ သင်တန်းများရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်ဖျက်ခြင်းအတွက်စည်းမျဉ်းများ၊ အရန်ကူးမိတ္တူများဖန်တီးခြင်းနှင့်ထပ်တိုးများကိုအသုံးပြုခြင်း။ အောက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ ဖော်ပြပါကိရိယာဖြင့်ဖန်တီးထားသောဆိုဒ်များကိုသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် link ကို၎င်း၏အပြည့်အဝအလားအလာစူးစမ်းဖို့။
၎င်းကိုAustralianစတြေးလျသင်ကြားရေးနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင် Martin Dougiamas မှတီထွင်ခဲ့သည်။ သူသည်ပထမဆုံးတည်ငြိမ်သောမူကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယနေ့ Moodle စီမံကိန်းကိုကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ် Moodle Partners ၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော Moodle ဌာနချုပ်မှ ဦး ဆောင်။ ညှိနှိုင်းသည်။
၎င်းသည်သင်တန်းသားများကို (ပညာရှင်များ၊ အုပ်ချုပ်သူများနှင့်ကျောင်းသားများ) အားတစ်ခုတည်းသော၊ အားကောင်းသော၊ လုံခြုံသောပေါင်းစည်းထားသောစနစ်တစ်ခုကိုအခမဲ့ (သို့) ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကိုယ်ပိုင်လေ့လာသင်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင်များပေးရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ဒါဟာအရမ်းစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေပေးချေမှုရသည့်တံခါးပေါက်များ၊ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ခြင်း၊
အဓိကအားနည်းချက်မှာ၎င်း၏ graphical interface သည်အလွန်အဆင့်မြင့်ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်ပြင်ပဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားဖြင့်ဖြစ်စေအခမဲ့ပေးဆောင်ခြင်းဖြစ်စေ၎င်းသည်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းအပါအဝင်အဖြေတစ်ခုရှိသည်။
ဒီကိရိယာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုလျှင်၊ အပိုင်း "အကြောင်း" နှင့်အပိုင်း "မကြာခဏမေးခွန်းများ" လိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်ဖော်ပြထားသော tool ကိုအကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြဘယ်မှာ။ ဒါ့အပြင်ကြောင်းသတိရပါ Moodle ၌တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများစွာရှိသည်၎င်းတွင်ရှိပြီးဖြစ်သောယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းအချက်အလက်အမြောက်အမြားရှိသည် လူများနှင့်နေရာများ၏ကြီးမားသောအသိုင်းအဝိုင်း သင်စိတ်ကျေနပ်လောက်သောအသုံးပြုမှုအတွက်သင်လိုအပ်သမျှကိုရှာနိုင်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက LMS ပလက်ဖောင်းများကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမြတ်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်အကြံပြုပါသည် 4ဤinရိယာ၌အလွန်ကောင်းသောသော။
"Bit4learn သည် e-learning ပြonနာများအတွက်ဗဟုသုတစင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောနည်းပညာများအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဗဟုသုတများဖြန့်ဖြူးခြင်းတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမြှုပ်နှံလိုသူအားလုံးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသည့်တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။". Bit4learn အကြောင်း။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Plataformas LMS» အခမဲ့, ပွင့်လင်းတစ် ဦး ကအခြားရွေးချယ်စရာပူဇော်သော ထိရောက်သောနှင့်ထိရောက်သော, အထူးသဖြင့်ဤအချိန်တွင်သင်ကြားခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်း teleworking နှင့် ဆက်သွယ်ရေး တစ်ခုလုံးအတွက်, လိုအပ်သောနှင့်လိုအပ်သောအလွန်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်လိမ့်မည် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » အခမဲ့၊ အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသော LMS ပလက်ဖောင်းများ - အင်္ဂါရပ်များနှင့် Functions များ
ယောနသန်သည် Cavero Linares ဟုသူကပြောသည်
ရွှင်လန်း! ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှကိုးကားထားသောအကြောင်းအရာအဖြစ်ယူထားသောကြောင့်သင်တို့၏ဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုးကားနိုင်ပါသလား။ ။ ။ 4
Jonathan Cavero Linares အားပြန်ပြောပါ
ယောနသန်၊ အကယ်စင်စစ်ငါသည်သင်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်တကယ်ကြိုက်တယ်ကြောင့်ငါငါ့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်ရန်အခြေခံအဖြစ်ယူသောအဓိကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အခြေခံကျသောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ် ၂ ခုနှင့်လည်း LMS Platforms တစ်ခုချင်းစီ၏မူလဆိုဒ်များကိုလည်းယူပါ။ ထို့အပြင်လူများသည်သင်၏ဝဘ်ဆိုက်နှင့် LMS ပလက်ဖောင်းများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အနည်းငယ်တိုးချဲ့နိုင်ရန်အတွက်သူတို့ကို ကိုးကား၍ ဆောင်းပါးတွင်ရည်ညွှန်းချက်အဖြစ်ထည့်ပါ။ ကြွင်းသောအရာအတွက်, အားလုံးအောင်မြင်မှုနှင့်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်။